Sunset - Tsvaga nzvimbo dzakanakisisa kuti unakirwe | Absolut Kufamba
Iwe unoda here kunakidzwa neyakanaka kuvira kwezuva? Icho chimwe cheanoshamisa zviitiko zvechisikigo zvaunogara uchifanira kushandisa. Neichi chikonzero, kunyangwe dzimwe nguva tisingatarise nezvazvo, ichokwadi kuti kune nzvimbo dzinosimudzira marongero aya, nekuti iwo anozoonekwa semitambo mikuru.
Kune zvese izvo zvinosanganisira, tinoita sarudzo ye nzvimbo dzakanakisa pasirese uye pakati pazvo patinowana mamwe mapoinzi enyika yedu, atisingafanire kuregeredzawo. Nyora pasi nzvimbo dzinotevera nekuti dzese dzinokusiya uine dzakanyanya kukosha nguva!
1 Nei kunyura kwezuva kuchikosheswa kwazvo?
2 Nzvimbo dzakanakisa munyika kunakirwa nekuvira kwezuva
2.1 Gomo fuji
2.6 Gwenga reThar
3 Nzvimbo dzakanakisa dzekutarisa kuvira kwezuva kana kunyura kwezuva muSpain
3.1 Iyo Mirador de San Nicolás
3.2 Guell paki
3.4 Finisterre, kunyura kwezuva kwakakosha
3.5 Punta Orchilla Chiedza
Nei kunyura kwezuva kuchikosheswa kwazvo?
Ndiyo imwe yenguva apo inoenda ndichionekana zuva iri uye saizvozvo, zuva rinonyura. Naizvozvo, apo mwenje wayo uri kufamba uchienda kana kudzika, ichagadzira nharaunda yemashiripiti nekuda kwekubatanidzwa kwemavara. Zvese muchikamu chedenga nepanyika. Saka kupenya kwakanyanya kunogara kuchiitika. Chinhu chatinoda uye chatinoda kuti chisafe. Nekudaro, iri zvakare inzvimbo ine rudo uye inozorodza. Sezvo munhu wese achanakirwa paanoda.
Nzvimbo dzakanakisa munyika kunakirwa nekuvira kwezuva
Iyi inzvimbo yepamusoro muJapan yese, ndosaka yakave chimwe chezviratidzo zvikuru zvepo. Iyo volcano Yakafuridzira akawanda mabasa uye zvingave zvishoma sei, iri zvakare imwe yenzvimbo uko kunyura kwezuva kunoshamisa kwazvo. Sezvo zuva richiita kunge riri kupinda mugomo uye richagadzira kupera kwemavara akatsvuka akafanana nemabota.
Nemamiriro ekunze ayo asingawanzo kuwira pazasi pe25º, isu tichavawo nesarudzo yakanakisa yekunakirwa nezuva rakazara. Uye zvakare, iyo mifananidzo inotaura pachayo, asi iko kusanganiswa kwetoni yeorenji neyebluish hue uye inoyevedza beaches, gara uchiita kuti titarisane neimwe yenzvimbo dzeparadhiso.
Ichokwadi icho Santa Monica mahombekombe zvinogona kutinhira kwatiri kubva pane zvisinganzwisisike nhevedzano kana bhaisikopo. Asi mukurumbira waro unoenderera mberi uye nderekuti kuvira kwezuva zvakare imwe yenguva dzemashiripiti. Padivi padoko, paine zvinokwezva zvakaita sevhiri remurindi, mhepo inopfuura inonakidza ichagadzirwa.
Tinoenda izvozvi kusvika South Africa kukwanisa kutaura nezvenyika yayo yechipiri ine vanhu vakawanda iyo isiri iyo kunze kweKapa. Kunyangwe ichizivikanwa nenzvimbo yechiteshi, ipapo inosanganisirwa nekuvira kwezuva. Munguva yaMay naAugust ivo vachapinda munguva yechando, saka zvinokurudzirwa kuti ushanyire muzhizha kuti unakirwe nerinoshamisira ruvara musanganiswa.
Munzvimbo ino zvinoitika zvakada kuita seGomo reFuji uye ndiko kuti, mubatanidzwa wekuvira kwezuva unoratidzwa mauri uye uchagadzira nharaunda ine mashiripiti anofashukira. Kana iri pachayo, nzvimbo yacho inoshamisa pamwe nekubatanidzwa kwePersia, Islamic kana Turkish zvinhu pakati pevamwe, iyo kuva husiku Inoipa runako runenge risinganzwisisike, iwe unofanirwa kungo rarama.
Nzvimbo ino inozivikanwa seyakakura indian renje. Iyi inzvimbo yakatambanuka inoenda kubva kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweIndia kuenda kumabvazuva kwePakistan. Iine zvimwe zvinomera uye nzvimbo dzine matombo. Zvakanaka, iwe unogona kupedza husiku mairi, sezvo paine mafaro echinangwa ichi. Nekudaro, iwe unozogona kuona kunyura kwezuva kurarama uye kunanga, uchinakidzwa nerakasarudzika chiitiko.
Senge ifirimu, taisakwanisa kupedza tisina kutaura nezve izvi Paka muKenya. Inzvimbo yakachengetedzwa yenzvimbo inogara marudzi ese emhuka. Nechikonzero ichi, zvakajairika mifananidzo yenyika ye cinema inouya mupfungwa Asi nechekure tichanakirwawo nekuonekana kwezuva rinotisiyira denderedzwa rakakura.
Nzvimbo dzakanakisa dzekutarisa kuvira kwezuva kana kunyura kwezuva muSpain
Iyo Mirador de San Nicolás
Isu tinoenda kuGranada uye ne Alhambra Nechekumashure, tinogona kupupura kumwe kwekuvira kwezuva kwakakosha. Pasina kupokana, zvinongoitika pasina kutaura kuti kuirarama kwakasiyana zvachose nemabatiro atingaita kuzvirondedzera. Iko kusanganiswa kwemavara uye iko kwekubata kwekunaka kunoenderana munzvimbo yakadai.
Este paki kuti isu tiri muBarcelona zvakare ine imwe yemaropafadzo makuru. Kunze kwekushamisika pachayo neese iwo marongero ekuvaka, haizoregi kupenya kana zuva richirova. Iko kusanganiswa kwemavara kunoonekwa ipapo kunoshamisa zvechokwadi.
Uyu nzvimbo yekuchengetedza Aragon neZaragoza ndiyo imwe yenzvimbo dzekufananidzira. Iyo ndeimwe yemakungwa makuru muSpain. Kunyangwe isina hove, zvakajairika kuona kuti shiri dzinoungana sei munzvimbo iyi. Naizvozvo, ivo, pamwe nenzvimbo uye manheru, vanoita musanganiswa wakasarudzika wekutarisa.
Finisterre, kunyura kwezuva kwakakosha
In the dunhu reA Coruña. MuGalicia, tinowana nzvimbo dzakaringana kutarisa kunyura kwezuva. Asi imwe yevakashanyirwa zvakanyanya iyi ndiyo pfungwa yaifungidzirwa yekumadokero, pakaguma nyika nekudaro izita rayo. Nemaonero anoyevedza egungwa, iyo showa haizove shoma.
Punta Orchilla Chiedza
Ino nguva yatinosvika Simbi uye kunyanya kune imwe yenzvimbo dzakashanyirwa zvakanyanya kubva panguva dzekare. saka haikwanise kutiza kubva pakuva imwe yemakona akakosha kuti ugone kutaura zvakanaka pazuva iri. Iwo mashiripiti akagadzwa ishoma kurondedzera uye zvakawanda zvekunakidzwa.
Tiri kutaura nezve paka zvakare, asi ichokwadi kuti pakati pekusanganiswa kwe matope pamwe chete nemhuka dzinowanikwa munzvimbo yakadai, inokukoka kuti uzorore uye unakirwe nenguva yakasarudzika. Hazvishamise kuti iri imwe yenguva apo vanhu vazhinji vanowanzo svika.
Ndicho chitsuwa padhuze neIbiza uye imwe yemakona yatisingakwanise kukanganwa. Unogona kuzviona kubva kwakasiyana mapoinzi, nekuti kusvika pachitsuwa, iwe unogona chete kuchiwana negungwa. Kunyangwe ichifanira kunzi runako rwayo rwakadai kuti chero kona iri pedyo iwe unogona kunakirwa iyo huru nguva iyo yatakataura. Kune dzimwe nzvimbo dzakawanda dzekunakidzwa nekuvira kwezuva muSpain, ndeyako ndeipi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zuva
Chii chekuona muJapan